Marketingkpụrụ Mgbasa Ozi Digital | Martech Zone
Nke a bụ nnukwu nchịkọta nke ọtụtụ ọnọdụ ndị anyị na ndị ahịa anyị na-achụ - ọchụchọ ị na-achọ, nchọpụta mpaghara, ekwentị mkpanaaka ire vidiyo, ire ozi ịntanetị, mgbasa ozi akwụ ụgwọ, ọgbọ ndu, na ahịa ahịa bụ usoro dị mkpa.
Ọ dị ezigbo mma na ikwesiri ịbanye na ọnụ ọgụgụ ahịa ahịa dijitalụ kachasị ọhụrụ na usoro kachasị ewu ewu maka usoro ịre ahịa dijitalụ gị ka ọ dị ire na 2019 na karịa. 7zọ asaa dị elu nke XNUMX Must Ga-Mararịrị maka Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi Ọma nwere ụyọkọ ọnụ ọgụgụ ahịa nke nwere ike ịme dịka ndụmọdụ bara uru iji meziwanye mkpọsa ahịa gị, gụnyere ikpebi ogologo ogologo maka ntanetị blog na ozi ịntanetị ma ọ bụ mee ka usoro SEO gị dịkwuo irè.
Ihe omuma ihe omuma a di otutu ihe obula nke obula kwesiri iche banyere ha ka ha mepee uzo ahia ha di iche-iche ma mechie ya. Gụnyere:
Search Engine Optimization (SEO) - Nke a bụ otu ihe kachasị mkpa maka azụmaahịa ọ bụla maka na ebumnuche ha nhata. Ọ bụrụ na m na-achọ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ na ntanetị, ohere dị na m dị njikere ịzụta. Na ihu, 57% nke ndị na-ere ahịa B2B kwupụtara ọkwa isiokwu na -emepụta nduzi karịa atụmatụ ahịa ọ bụla.
Nchọpụta Nchọgharị Obodo (SEO mpaghara) - Ọ bụrụ na ị bụ azụmahịa mpaghara, ịbụ nke a na-ahụ anya na nchịkọta map Google dị oke egwu - 72% nke ndị na-azụ ahịa bụ ndị mere nchọpụta mpaghara gara ụlọ ahịa n'ime 5 kilomita. Google My Business a maara ugbu a dị ka gị Nke abụọ website.
Nchọgharị ekwentị - ọkara nke mba ahụ na-enyocha ekwentị ha tupu ha ebili na 48% nke ndị ahịa niile na-amalite nyocha mkpanaka na nyocha na ngwaọrụ ha. Nkwụ ụgwọ mgbasa ozi ntanetị na-aga n'ihu na-ebili - nke ihe ruru $ 20 ijeri.
Social Media Marketing - mmata na mmụba na-arụ ọrụ dị ịtụnanya nke ọma na ọbụlagodi na mgbasa ozi akwụ ụgwọ na Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest na LinkedIn. Ọbụghị naanị nke ahụ, ụdị nwere ohere iji wuo obodo nke aka ha ma soro agbụrụ ha na-enwe mmekọrịta onwe ha.
Marketing Video - Enweghị m otu onye ahịa na anaghị m etinye ụdị usoro vidiyo maka. Ana m ewu ụlọ ihe nkiri vidio maka otu onye ahịa maka ezigbo vidiyo vidiyo, enwere m vidiyo na-emegharị vidiyo maka saịtị ndị ahịa ọzọ, ana m ebipụta vidiyo na-akọwa ihe nkiri maka onye ahịa ọzọ, anyị na-ewepụta ngwaahịa. akụkọ vidiyo maka onye ahịa ọzọ. Vidio dị ọnụ ala na bandwit abụghịzi nsogbu mgbe ị na-eru ndị na-ege gị ntị. 43% nke ndị mmadụ chọrọ ịhụkwu ọdịnaya vidiyo site na ndị ahịa!
email Marketing - ozi ịntanetị oyi nọgidere na-eme ka ị mata na ohere maka ndị ahịa. Nkewa na nkeonwe na-aga n'ihu na-emeghe ma na -pị ọnụego. 80% nke ndị ọrụ email na-enweta akaụntụ email na ngwaọrụ mkpanaka ha, yabụ, nzaghachi nke mkpanaka bụ ihe kwesịrị.
Vertgwọ Mgbasa Ozi - dịka ọnụọgụ nke ọwa na ụzọ na-abawanye, na mmụta igwe na ọgụgụ isi na-emeziwanye nhazi ma belata ụgwọ, mgbasa ozi akwụ ụgwọ na-adịwanye irè karịa n'oge gara aga. Nyocha a na-akwụ ụgwọ, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ọdịnaya nkwado, mgbasa ozi vidiyo, na ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ dị maka ụlọ ọrụ iji rite uru.
-edu ndú Ọgbọ - iwu ụlọ na ntụgharị peeji nke kachasị mma na ịnya ụgbọ ala na-eduga ebe ahụ site na iji nlezianya dozie, akpaghị aka, na njem ndị ahịa elebara anya na-aghọ otu n'ime usoro ịzụ ahịa dijitalụ kachasị dị irè nke afọ iri.
content Marketing - ndị na-azụ ahịa na azụmaahịa na-aga n'ihu na-eduzi onwe ha ma nyochaa nzụta ọzọ ha n'ịntanetị. Site n'ọtụtụ mkpọtụ ebe ahụ, a na-amanye ụlọ ọrụ itinyekwu oge na ume n'ime ọdịnaya nke na-ebute nsonaazụ n'ezie, mana mgbe ha mere, ọ bụ ụzọ dị mma ma dịkwa ọnụ ala iji dọta ndị ahịa.
Nke a bụ akwụkwọ ozi zuru ezu, nnukwu nkwado nke uto na atụmatụ nke azụmahịa gị kwesịrị itinye:
Tags: onye edemedecontent Marketinggoogle edemedemgbasa ozi mgbasa oziahịa efuSocial Media Marketing
Mee 22, 2013 na 3: 34 AM
Ihe omuma ihe omuma! Daalụ maka ịkekọrịta nke a na anyị.
Mee 22, 2013 na 6: 43 AM
Ọrụ dị mma, Doug. Ọ dịghị mfe ịnweta usoro ndị a niile na data nkwado na ntinye anya. Daalụ!
Mee 23, 2013 na 8: 33 AM
Nke a bụ ezigbo infographic. Mana ihe ndị a abụghịkwa amụma maka afọ 2012? Echere m ahia mkpanaka, ire ahịa ọdịnaya, mgbasa ozi mmekọrịta - belụsọ ọkwa onye edemede.
Mee 23, 2013 na 9: 21 AM
Enweghị mgbagha ọ bụla!